Global Voices teny Malagasy » Riau, Indonezia : Zavon’ny ‘Ground Zero’ Ao Azia Atsimo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Jolay 2013 4:32 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika nirinandrea
Sokajy: Azia Atsinanana, Indonezia, Malezia, Singapaoro, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Tontolo_iainana
Ilay setroka mahafaty  nandrakotra an'i Singapore sy ireo faritra sasantsasany tao Malayzia hita tamin'ity taona ity dia vokatry ny doro ala tao Riau, izay ao amin'ny faritra Andrefan'i Indonezia. Mazava ho azy fa nisarika ny sain'ireo filazam-baovao goavana rehetra izany, kanefa, vitsy ny tatitra mahakasika ny manjo ireo mponina ao Riau izay tena nijaly tokoa ary mbola mijaly ihany hatramin'izao noho ny vokatra naterak'ilay setroka sy ireo doro ala maro.
Zul Othman avy ao amin'ny The New Paper dia nidera ireo mpamonjy voina  ao Riau tamin'ny fikelezana aina nataon'izy ireo mba tsy hampihanaka ny afo :
Ireo politisiana kosa afaka niresaka sy nihebohebo araka izay tiany avy, kanefa tao amin'ny “ground zero ” tao amin'ny faritanin'i Riau, Indonezia dia ireo manana fanahy sahy sy matanjaka no nisedra ny afo izay toa tsy ho faty mihitsy raha ny fahitàna azy.
Niatrika mivantana ny afo navaivay izy ireo. Tena mafy sy sarotra tanterahana izany lahasa izany. Ary tsy ny kely indrindra tamin'ny olana natrehan'izy ireo dia ny hoe : Ahoana no fomba hiadiana amin'ny afo tsy misy rano ? Ahoana no fomba hanohizana ny ady kanefa ny tratranao aza may ?
Voatondraka ny afo fa tsy mety voafehy tanteraka mihitsy. Mbola manetroka be ireo ampahana kitay may, izay mandefa hafanana sy setroka manentoento.
“Life Story of a Driller” dia nitsidika ilay valan'ny ‘Smog Attack – fanafihan'ny zavona‘  :
Halina, nijoro teny amin'ny faritry ny bozaka main'ny afo tany Bengkalis, Riau (20/06/2013) aho. Antsoin'ny olona hoe Smog Attack io. Smog dia midika hoe “Smoke+Fog” na “Afo+Zavona”. Ao Singapore, antsoina hoe Setroka fotsiny ilay izy, satria tsy dia natevina be loatra.
Ilay Foibem-pikarohana Iraisam-pirenena Rorestry dia nanazava  ny antony nampijanona ela ilay zavona tao amin'ny faritra :
Mijanona ny zavona satria mbola eo koa ny afo. Manodidina ny 3–4 metatra ny ambanin'ireo antontan-porohana no halalin'ny afo. Mila mametaka fantsona anatin'ireo antontan-porohana may ireo ny mpamonjy voina mba hamonoana ny afo
Sarintany ahitana ny doro ala tao Indonezia avy amin'ny Foibem-pikarohana Iraisam-pirenena Rorestry
Nisy ny sarintany  niarahana namolavola mba hanaraha-maso tsy misy tomika ny fielezan'ny  entona sy ny doro ala ao amin'ny firenena. David Gaveau sy Mohammad Agus Salim dia nandinika  ireo antony niavian'ny entona :
Maro tamin'ireo fahamaizana nitranga ny volana Jona 2013 no avy amin'ireo fomba fametrahana sy fikarakarana ny fambolena. Ny fiakaran'ny afo haingana be tao anaty fotoana fohy, ny haben'ny afo hita eny amin'ireo antontam-porohana may izay tena hita fa fomba fanaon'ny olona tavy teny amin'ny faritry ny afo….izany no manohana io ahiahy io.
Ny toetr'andro (anatin'izany ny fizotry ny rivotra) dia vao miha nampitombo ny olana teo amin'ny entona ny volana Jona 2013 raha oharina tamin'ireo doro ala nisy taloha.
Fidelis E. Satriastanti dia niantso ilay entona nipaka tany amin'ireo firenena rahavavin'i Indonezia ho ‘loto nafindra’  :
…nisy ny fepetra noraisin'i Indonezia toy ny fametrahana fampiatoana vonjimaika ny fitrandrahana ala hiadiana amin'ny fihanahan'ny entona miteraka hafanana. Kanefa hita izao fa toa tsy ampy izany fisorohana noraisina izany ary voafetra ihany ny fahombiazany.
Nomarihin'ilay mpanoratra ihany koa fa ireo mpamboly madinika no nosamborin'ireo manam-pahefana fa tsy ireo tomponà tany fambolena goavana :
…ireo madinika mpanararaotra no nosamborin'izy ireo ary ireo orinasa lehibe izay mampihatra ny fomba tsotra indrindra ahafahana mamboly voanio fanao menaka kosa navelany : mandoro ny ala.
Amiko, sarotra hinoana ny hoe ireo mpamboly madinika no nahatonga izao fahavoazana be izao. Voalohany, matetika tsy azy ireo ny tany. Faharoa, raha manana tany aza izy ireo, dia tsy mihoatra ny roa hektara.
Raha afaka nitondra ny fialantsininy tamin'ireo firenena rahavavy ny Filoha, azo antoka koa izany fa afaka ny hitondra ny fialantsiny amin'ireo vahoakany izy noho ny tsy nahavitany niaro ireo taranaka hoavy ao amin'ny fireneny.
Ala may tao Riau, Indonezia. Sary nalain'i Virna Puspa Setyorini, Fizakà-manana @Demotix (6/20/2013)
Unspun  dia tena diso fanantenana kely tamin'ny fahelan'ny fandraisan'ireo manampahefana Indoneziana fepetra hiatrehana ilay olana :
Amin'izao vanim-potoana ahafahana maka sary amin'ny Satelita izao, fanadihadiana inona indray no mbola ilaina ahafahana mijery akaiky ireo toeram-pambolena misy doro ala sy hanamelohana azy ireo ? Setroka inona àry no trohan'ny Ministry ny Ala sy ireo manampahefana ao Indonezia ireo ?
@iamdreamcatcher  dia nampakatra sary ahitàna ala iray may tao Riau ary nanameloka ireo orinasa  tsy mandray andraikitra :
Misy amin'ireo orinasa no manana tany ifanarahany amin'ireo nosy roa; Sumatra sy Kalimantan. Efa nitranga ny toa izany herintaona lasa izay, ary heveriko fa tsy i Singapore na i Malezia ihany no efa leo ny toa izany, fa izahay koa dia mahatsapa izany amin'ireo olona tsy mahatsapa ny andraikiny ireo…
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/07/21/50159/
 setroka mahafaty: http://www.thejakartaglobe.com/news/why-indonesia-can-only-wait-for-rain-as-riau-burns-and-singapore-chokes/
 Singapore : https://globalvoicesonline.org/2013/06/24/haze-chokes-singapore-and-malaysia/
 mpamonjy voina: http://www.tnp.sg/backstage/content/hazed-out-riaus-burning-hell-earth
 ground zero: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ground_zero
 ‘Smog Attack – fanafihan'ny zavona‘: http://catatandriller.tumblr.com/post/53504221365/last-night-i-stood-on-the-one-of-grass-fire
 dia nanazava: http://blog.cifor.org/17591/qa-on-fires-and-haze-in-southeast-asia/#.UeOqU403CEx
 dia nandinika: http://blog.cifor.org/17493/new-data-on-indonesia-fires-generate-important-insights/#.UeOqUY03CEx
 ‘loto nafindra’: http://www.thejakartaglobe.com/blogs/globe-beat/indonesias-never-ending-smoke-saga/